Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Janoary 2019 à 17:46
Endrik'io pejy io tamin'ny 29 Desambra 2018 à 04:46 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Janoary 2019 à 17:46 (hanova) (esory)
Ny '''Bokin’i Ezekiela''' dia boky ao amin’ny [[Tanakh]] (Baiboly hebreo) sy ny [[Testamenta Taloha]] ao amin’ny [[Baiboly]] kristiana. Milaza fitsarana sy fandrahonana an’ireo Israelita ny faminaniana raha mbola tsy rava ny [[Fanjakan'i Jodà|Fanjakan’i Joda]], fa faminaniana ny fanamelohana ireo firenena mpampahory ny vahoakan’Andriamanitra sy fanantenana ny hiverenan’ny voninahitr’i Isiraely kosa no vontoatin’ny faminanianana nandritra ny [[Fahababoana tany BabiloniaBabilona]]. Ho tsaraina amin’ny asa nataony avy ny olombelona tsirairay sady hisy ny fitsanganan’ny maty ho velona. Haorina fanindroany ny Tempoly. Izany dia fahitana apokaliptika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/963630"